Wararkii U Dambeeyay Xaalada Degmada Dhuusamareeb. – Calamada.com
Wararkii U Dambeeyay Xaalada Degmada Dhuusamareeb.
Iyadoo saacadihii lasoo dhaafay gudaha degmada Dhuusa mareeb ee gobalka Galgaduud ka dhacay dagaal culus oo saacada badan socday kaasi oo u dhaxeeyay maleeshiyaatka Suufida iyo maleeshiyaat uu watay dagaal ooge Liibaan Madaxweyne ayaa waxaa isasoo taraya khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi.
Dhimashada ayaa ku dhaw 30 ruux oo isugu jira maleeshiyaatka dagaalamay iyo dadka shacabka’iyadoona dhaawaca uu intaasi ka badanyahay kuwaasi oo dhaawacyadooda la kala dhigay isbitaalada degmooyinka Dhuusa mareeb iyo Guriceel.
Wararkii ugu dambeeyay ee caawa ayaa sheegaya in xaalad deganaansho ah oo aan caga badan ku taagneen ay ka jirto degmada’iyadoona boqolaal ruux oo maanta ka barakacay degmada ay ku suganyihiin deegaano hoostaga degmadaasi.
Saraakiil u hadlay maamulka Mushrikiinta ee dowlada Itoobiya dhistay ayaa sheegay in isagoo dhaawac ah ay nolasha ku qabteen Liibaan Madaxweyne oo wararka qaar sheegayaan in taageero ciidan uu ka helay dhanka maamulka Galmudug mudadii maanta dagaalka uu socday.
Wali si rasmi ah ugama aysan hadlin dagaalkii maanta ka dhacay degmada Dhuusamareeb dhanka Liibaan Madaxweyne iyo maamulka Galmudug oo maamulka Suufida ay ku eedeeyeen iney taageero u ahaayeen Liibaan Madaxweyne.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 22-05-1437 Hijri.
Next: Ciidamada Mujaahidiinta Ansaaru Shareecah Iyo Kuwa Khaliif Xiftar Oo Ku Dagaalamay Bariga Liibiya.